Ị nwụọla ịlụso nká? Ọfọn, ọgwụ na-egbochi ịka nká ejighị n'aka na nhọrọ nke a pụrụ ịdabere na ya ka ị gbanwee elekere ndụ gị. Lelee akụkụ ndị dị egwu nke Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ọrụ ya na ọkpụkpụ, na otu esi enweta ọgwụgwọ ahụ.
Phcoker bụ onye nrụpụta ọkachamara iji mepụta ntụ ntụ Nicotinamide mononucleotide (NMN)
Na-eto eto bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Otú ọ dị, enwere ike ịgbanwe usoro ịka nká Nicotinamide Mononucleotide. Jide ịnyịnya gị n'ihi na m ga-enye gị nkọwa zuru ezu banyere otú kpụrụ akpụ nke ọrụ ndị dị n'ime sel mmadụ.
Isi awọ na-adaba n'amamihe!
Nkwenkwe a bụ ma ọ bụ ihe kacha mma ị ga-ekwu. Ka o sina dị, ọchị gị ga-adị mkpụmkpụ mgbe ịmalite ịhụ ọkpụkpụ niile ahụ gị. Ihe ọzọ bụ na ịka nká na-emetụta ma ọrụ anụ ahụ ma nke nwere uche.
Ka anyị chee ya ihu. Na Mgbochi nká Ude ihu na ịwa ahụ ịchọ mma abụwo ihe dị na narị afọ a mara mma. Ihe ị kwesịrị ịma bụ na usoro ndị a anaghị adịte aka, ha nwekwara ike ịkpalite nnukwu nsogbu.
O doro anya na ị ghaghị ịlụso ịka nká ọgụ site na ịmalite ịghọta usoro usoro cellular na physiological nke na-arụ ọrụ na ọnọdụ ndị metụtara afọ. N'ikpeazụ, ọ na-adị mfe ịdọrọ usoro nke ịlụ ọgụ megide ọrịa. Na-egbochi ịka nká Nicotinamide Mononucleotide ọrụ iji weghachite ntorobịa.
Anyị niile chọrọ ịmalite afọ ojuju, nri? Nke a, nke a nwere ike ime ka ọ ghara ịdị irè mgbe ahụ gị na-aga n'ihu na-ada mbà, ma ị kwụsịrị ịbụ magnet maka ụdị ọrịa obi ọ bụla, Alzheimer's, loss memory, na ndị ọzọ.
Omimi Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ya mere, gịnị ka ihe niile gbasara Nicotinamide Mononucleotide? Ka m kọwaa ya.
NMN dị na ụdị alpha (α) na beta (β). Otú ọ dị, β-NMN bụ ụdị kachasị. Nkucleotide a na-emepụta ihe bụ ihe dị n'ime biosynthesis nke nicotinamide adenine dinucleotide ma ọ bụ NAD +.
Ngwurugwu a na-adịkarị na avocadoes, tomato, kukumba, cabbages, broccoli, na anụ ezi. Na ụlọ nyocha, ọ dị dị ka nicotinamide mononucleotide nnukwu ntụ ntụ.
N'elu ya, ọ na - egosi nọmba CAS, 1094-61-7. Ngwakọta ahụ sitere na mmeghachi omume n'etiti nucleoside, dị ka nicotinamide riboside na otu phosphate.
Na nyocha nke emere, Nicotinamide Mononucleotide na-arụ ọrụ na ụmụ oke egosila na ọ bara uru na arụ ọrụ biochemical, njikwa nke ọrịa Alzheimer, ọrịa shuga metụtara afọ, nsogbu ndị na-esite na oke ibu, na cardioprotection. N'agbanyeghị ọrụ ọgwụ ndị a niile metụtara Nicotinamide Mononucleotide, nchọpụta kachasị njọ bụ itinye aka na ọrụ ịka nká.
N'anụ ahụ, NMN bụ isi iyi nke ume n'ime sel. Ka ị na-etolite, ike cellular na-ebelata n'ihi ụda ala nke nicotinamide mononucleotide na mbelata nke NAD +. NMN nchịkwa ga-agbanwe usoro ahụ ma kwụọ ụgwọ maka ụkọ.
(1) Kedu ka NMN si dị omimi?
Ndị ọgwụ ndị a na-egbochi ịka nká na-eme njem dị ka àmụ̀mà si n’afọ gaa n’ọbara. N'ime nkeji ole na ole, a ga-eburula ha n'ọbara. Maka nke a, ọ bịara doo anya na enwere ike ghara ịmetụta ihe ọ bụla na - eme na ntanetị.
Ọsọ dị mgbagwoju anya emeela ka ndị na-eme nchọpụta kwubie na ọ ga-ekwe omume ibuga gị ụgbọ mmiri, nke na-eme ka nnyefe mmanụ na-ebugharị. Iji maa atụ, Imai na ndị otu ya zubere ịchọta azịza site n’ọmụmụ ihe ya na nso nso a nke e bipụtara na Jenụwarị 7, 2019.
Na ịka nká, ahụ na-eji NAD karịa karịa ka ọ nwere ike ịmepụta. N'agbanyeghị otu ihe ị jiri nicotinamide mononucleotide, usoro a ga-abụ igbu oge ma ọ bụrụhaala na enweghị igwe iji nyere ya njem. Nọgidenụ na-agagharị iji kọwaa onye njem dị omimi nke ga-edozi 90% nke nsogbu ịka nká.
(2) Nyocha Nicotinamide Mononucleotide Structural Formula
(3) Nicotinamide Mononucleotide nkọwa
Product aha Raw Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ntụ ntụ
CAS ọ dịghị. 1094-61-7
Ụkpụrụ na-eme ihe C11H15N2O8P
molekụla ibu 334.221 g / mol
ọcha > 98%
Solubility Mmiri soluble
nchekwa okpomọkụ -20 ° C
Ndị ọzọ na aha · Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-phosphate
ma Nicotinamide Mononucleotide na NAD + bụ ndị na-emepụta ihe ndị dị ndụ na-enyefe mmanụ ụgbọala.
NMN bụ ebe etiti na biosynthesis nke Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Ihe ahụ na-eme dị ka mkpụrụ maka enzymes ụfọdụ dịka nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, nke gbanwere NAD + n'ime ahụ mmadụ. Mgbe a na-eweda ala, ụlọ a gbanwere nicotinamide. N'ikpeazụ, ọ na-enweta mmeghachi omume ọzọ nke na-akpata nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) na-eme NMN.
A na-ahazi mkpụrụ ndụ abụọ a ka enweghị nke ọ bụla n'ime ha ga-emetụta nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ọkwa NMN dara n'okpuru kachasị mma, ikekwe site na nsị, ọnụ ọgụgụ nke NAD + ga-agbada.
Mgbe ị dị afọ, ụfọdụ ọrụ enzymatic na-eri NAD + karịa ahụ nwere ike ịmepụta mmanụ. Ndị sirtuins, NADase, na poly-ADP-ribose polymerase (PARP) bụ akụkụ nke enzymes, nke na-ere ọkụ NAD + nke na-eduga ná njedebe ya.
Otú ọ dị, nkwụsị nke mmanụ ụgbọala anaghị abaghị uru. Were, dịka ọmụmaatụ, mmeghachi omume enzymatic nke metụtara PARP na-enye aka n'ịdozi DNA mebiri emebi. Ọzọkwa, ndị isi nzuzo na-arụ ọrụ dị ịrịba ama iji melite metabolism cellular.
Ọ bụ ezie na mmekọrịta mmekọrịta nke ụlọ ọgwụ dị n'etiti ndị na - arụ ọrụ abụọ a, ị nweghị ike inye NAD + usoro ahụ ozugbo. N'ihe dị ka usoro ahụ ga-ekwe omume, nsonaazụ ya agaghị enwe isi. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ike ọgwụgwụ, nchekasị, na ehighi ụra eme ihe n'ụzọ dị elu. Ihe ọzọ bụ na ngwongwo ahụ adịghị enwe ike ịbanye site na membran plasma.
(1) Usoro nke Absorption
The mgbochi nká Nicotinamide Mononucleotide dị dị ka ọgwụ ọnụ. Mmiri ọ na-etinye site na mgbidi na-abanye n'ime usoro ọbara na-amalite n'ime ihe dị ka nkeji atọ. Site 15th min, a ga-ewere ya niile. Nnyocha zuru ezu nke Imai na ndị na-eme nchọpụta na-achọpụta na enwere protein na-eme ka ọnụọgụ ngwa ngwa a.
N'elu ikpochapu n'ime anụ ahụ, NMN na-agbanwe ngwa ngwa na NAD + maka nchekwa dị mma. Usoro nchịkwa nwere ike ijide ọkara otu awa. Ọnụ ọgụgụ nke NAD + jupụtara n'ọkpụkpụ ọkpọ, anụ ahụ na-acha ọcha, imeju, na cortex. Otú ọ dị, nchịkwa oge na-adịghị anya nke Nicotinamide Mononucleotide rigoro elu nke NAD + n'ime akụkụ ndị ọzọ dịka anụ ahụ na-acha aja aja.
(2) NMN Biosynthetic ụzọ
N'ime sel ndị dị ndụ, ọ dị ụzọ atọ metabolic dị iche iche na-akwụ ụgwọ maka NAD.
① Ụzọ No Devo
De Novo bụ okwu Lain, nke pụtara "site ná mmalite." N'ebe a, nucleotides na-enweta site na tryptophan ma ọ bụ nicotinic acid, nke sitere na nri NMN bara ụba.
Na ụzọ a, usoro usoro ihe ndị dị ndụ na-eduga ná nchịkọta nke nicotinic acid mononucleotide, nicotinic acid adenine dinucleotide, na n'ikpeazụ ihe dị ịtụnanya NAD +. De Novo na-arụpụta banyere 15% nke mmanụ ụgbọala zuru ezu.
② Ụzọ Nzuzo
N'ebe a, ụzọ na-agbapụta ihe mgbaru ọsọ na ebe DNA na-agbada. Ọ bụ ihe karịrị 80% nke ngụkọta NAD +, nke ahụ mmadụ chọrọ maka ọrụ cellular. Ụzọ na-emegharị ma nicotinic acid na nicotinamide iji mee ka NAD + dị ọhụrụ.
Nicotinate phosphoribosyltransferase mepere nicotinic acid mononucleotide site nicotinic acid. N'ikpeazụ, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 na-akpalite adenylation nke ngwaahịa na-arụpụta ihe na nicotinic acid adenine mononucleotide, n'ikpeazụ ka NAD +.
NMN na-arụ ọrụ na mmadụ dabere na ụzọ a.
Nicotinamide Riboside bụ NAD + mbụ. N'elu phosphorylation na ọnụnọ nicotinamide riboside kinase, onye na-emepụta biomarker na-emepụta NMN tupu ya etinye ntụgharị ọzọ nke enzymatic n'ime NAD.
Akụkọ banyere NAD + na NMN na Nyocha
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọmụmụ ihe na ọgwụgwọ nke nicotinamide adenine dinucleotide na ndị na-aga n'ihu bụ ọnụma niile. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịdeba ama na ndị a ihe mgbakwunye na-eme agadi enwere ebe nile nyocha ebe ọ bụ na etiti 1900s.
Na 1906, ndị ọkà mmụta mbụ gosipụtara na NAD + na-eme ka ọnụ ntụ ahụ sie ike. N'ikpeazụ, ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ na-edozi ya site n'ịkọwa ya dịka nucleotide.
Site na nchọpụta ya na 1937, Conrad Elvehjem chọpụtara na nicotinamide na nicotinic bụ vitamin na nkwụsị nke NAD +. Mgbe e mesịrị, ọ chọpụtara na ha abụọ nwere ike ibelata pellagra na nkịta. Ihe kpatara ya bụ na ogo nke nicotinic acid na nicotinamide dị n'okpuru kachasị mma maka ndị na-arịa ọrịa ahụ.
Na 1963, otu ndị ọkà mmụta sayensị guzobere na Nicotinamide Mononucleotide na-arụ ọrụ na ụmụ oke ga-akpali enzymes dabere na DNA, bụ nke dị mkpa n'ịkwalite ọrụ cellular. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ụfọdụ ndị nyocha webatara ụzọ NAD + nke sitere na tryptophan na acid nicotinic.
Kemgbe ahụ, ndị na-emepụta ihe banyere ndụ mmiri anọgidewo na-egosipụta mmasị na nchọpụta NMN na NAD. N'oge a, ihe dị oké mkpa bụ na ihe ndị a pụtara ọgwụ ọjọọ na ogologo ndụ na nsogbu na-akpata nsogbu.
Nnyocha ọhụrụ nke Nicotinamide Mononucleotide Ọrụ na ụmụ oke
Enwere otutu ihe omuma nke omuma nke ndi mmadu na-emeputa uru nke Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7).
Ka anyị lekwasị anya na ole na ole, bụ nke nwere mmetụta na-agbanwe agbanwe na nchọpụta mmiri.
(1) Dị ka Sinclair si kwuo, NAD + bụ Isi iyi nke Ntorobịa
Dr. Sinclair na ndị ọrụ ibe ya ebipụtala ọtụtụ nyocha banyere ikike nke nicotinamide mononucleotide na NAD + n'ịgbanwe ịka nká. Dị ka nyocha 2013 ya si kwuo, Sinclair na ndị otu ahụ chọpụtara na ụmụ nwanyị 22 nọ na-ewere NMN maka ụbọchị isii gosipụtara mmụba na ikike ahụ ike, metabolism, na ntachi obi.
Mgbe e mesịrị na akwụkwọ nyocha 2016, òtù ahụ kwadoro na NMN nwere uru ndị dị otú a dị ka mmega ahụ. Kama ị na-agba ọsọ na-emegharị kwa ụbọchị, ị ka nwere ike inwe mmetụta ndị ahụ mgbe ị na-eji nchịkọta Nicotinamide Mononucleotide kama.
Dị ka Harvard Geneticist si kwuo, ọ bụ NMN na-arụ ọrụ na mmadụ na-agbanye aka n'ịmegharị ọbara na ndị agadi na ndị ọkachamara.
(2) Mills Na-ekwu na NMN Na-eme Ka Ndajupụta Ahụhụ Na-adabere na Mice Aging
N'ihe banyere nchọpụta 2016, Mills et al. chọpụtara na NMN ọgwụgwọ ga-egbochi nkwụsị ma ọrụ physiological na immunological na ụmụ oke ụmụ oke. Na njedebe nke nchịkọta NMN a nyocha, òké ahụ debara aha mmụba na nkwupụta nke mkpụrụ ndụ na-enweghị ihe mgbochi, mmụba lymphocytic, na ịda mbà na neutrophils.
Na mbu, na 2011, Mills, Yoshino, na Imai ejirila ụdị oke iji gosipụta ọrụ NAD + n'ịgwọ nri na-akpata na ọrịa shuga metụtara afọ. Na nyocha 2016 ọzọ, o sonyeere ndị nchọpụta ndị ọzọ guzobere na NMN supplementation ga-egbochi nrụgide oxidative na nkwarụ vascular na ụmụ oke.
(3) NMN na - ebute Ọrịa Alzheimer (AD) na Ụdị Mmanụ
Na 2015, Long et al. nyochaa mmetụta nke NMN na ụbụrụ mitochondrial respiratory deficits na ụmụ oke na ọrịa Alzheimer. Ndị otu ahụ kwuru na ọgwụgwọ NMN nwere ike ịgwọ etiology nke AD, gụnyere obere OCR (ọnụọgụ oxygen), NAD + falloff, na ọdịiche mitochondria.
Na 2016, Wang na ndị otu ya bipụtara nyocha ha, na-ekwubi na ndị a Mgbochi nká ọgwụ na-alụ ọgụ na mmerụ ahụ, nke sitere na β-amyloid (Aβ) oligomer. Nkpuru osisi A is bu neurotoxic ma obu ya bu ihe kpatara nsogbu emere na ụbụrụ nke ndi AD. Wang et al. kwubiri na nchịkwa NMN na ụmụ oke mere ka mbelata nke ndị oligomers, wee si otú ahụ na-eme ka ọrụ ọgụgụ isi dịkwuo elu.
Na-esote ọmụmụ ihe nke 2017, Hou na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na mgbakwunye NAD + belatara mmepụta nke oligomers β-amyloid. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, Yao na ndị otu ya guzobere na Nicotinamide Mononucleotide na-ebelata nchịkọta nke Aβ na synaptic ọnwụ na ụdị AD-Tg murine.
(4) NMN na Cardio-nchedo
Dabere na akwụkwọ 2014 nke Yamamoto na ndị ọrụ ibe ya dere, NMN echebe obi megide ischemic mmerụ na reperfusion. Tupu ọmụmụ ihe a, Yamamoto bụ akụkụ nke otu 2012, nke chọpụtara na NAD + na-eri nri na-ebute oke ibu na ụmụ oke.
Na 2016, De Picciotto et al. na ndị ọkà mmụta ọgwụ ibe ya gụrụ banyere mmetụta nke NMN supplementation na arụmọrụ vascular nke ụmụ oke. Site na ntinye, nicotinamide mononucleotide gosipụtara na ọ dị irè na-agbanwegharị nkwarụ akwara, nrụgide oxidative, na ibelata elastin.
(5) Nchọpụta na Ụzọ Ọhụrụ nke Cell Fuel Delivery site Shin-Ichiro Imai
Na nnyocha ndị na-adịbeghị anya, ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị nke Imai na-eduzi ma mee ka onye na-ebugharị NMN gafere n'ime sel.
Nchoputa NMN nyochaa bu nke mbu na January 2019 na Nature Metabolism. Imai kwubiri na otu protein, Slc12a8, bu oru maka ntughari ngwa ngwa nke NMN gaa NAD + ma bufee ya na cell. Nke a na-enzyme kachasị na ndị na-eto eto karịa ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị dị mma.
N'ime ọmụmụ ihe niile, ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nchọpụta ga-agbaze usoro a maara nke nicotinamide mononucleotide nnukwu ntụ ntụ n'ime mmiri tupu ị nye ha ụmụ oke.
Uru site Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
NMN nwere ọtụtụ ọrụ nlekọta ahụike na mmetụta ọgwụ na ahụ mmadụ. N'ihe na-erughi afọ iri, ndị ọkà mmụta sayensị enyefeela oge ha iji mụọ ihe niile Nicotinamide Mononucleotide bara uru gụnyere usoro ndị na-akọwa ịka nká na ọrịa ndị metụtara afọ.
Ka anyị tụlee uru nke onyinye dị na sistemụ mmadụ.
(1) Ịgbatịkwuo Cellular Lifespan
Ruo mmalite nke 21st narị afọ, ndị ọkà mmụta nwere ezigbo ihe mere ha ga-eji kwuo na ịka nká dị ka usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha. Otú ọ dị, echiche a abaghị uru n'ihi nchọta nke njedebe nke ihe mgbakwunye na-eme agadi dị ka Nicotinamide Mononucleotide.
NMN bụ ihe na-eme n'ime mkpụrụ ndụ mmadụ nakwa na ọ bụ maka biosynthesis nke NAD + na mmepụta ike. Ka ị na-aka nká, ogige abụọ ndị a na-eme ka ọ bụrụ nke na-eduga ná nchịkwa nke mkpụrụ ndụ ahụ. Cheta, mpaghara ndị a na-arụ ọrụ dị mkpa maka mmanụ ụgbọ ala iji mee ka ọ dị mma mgbe niile, ya mere, ọdịda ga-eme ka ndụ mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ.
Ijikwa ọgwụ ọjọọ na-eme ihe dị ka NMN ga-eme ka usoro ahụ kwụsị ma kwụsị oge ịka nká.
(2) Na-akwado Ntọala Egwuregwu Ndị Ntorobịa Na-eto Eto
Isi mmalite nke ọrịa ndị metụtara ịka nká na-agbada ruo na ọkwa larịị. Mbelata nke mmepụta ume n'ime mkpụrụ ndụ bụ isi ihe na-akpata ihe mgbaàmà nke agadi.
N'ịbụ onye na-aga n'ihu nke NAD +, NMN nwere ọrụ ọ ga-arụ iji nọgide na-enwe ike kachasị ike nke mitochondria cell. Okenye ga-eme ka mbelata nke NAD + na-akpaghị aka. N'ihi ya, oge ịka nká na-eburu na-ebute mmepe nke ọrịa ịka nká.
Mbelata nke ike mkpụrụ ndụ n'ime akụkụ dị mkpa dị ka mọzụlụ, arịa ọbara, akụrụ, imeju, ma ọ bụ pancreas mgbe niile na-egbochi ahụ ike na anụ ahụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọrịa ndị dị ka ischemia, ọnọdụ obi, akụrụ akụrụ, ọrịa nchịdegenerative, na ndị ọzọ na-agbapụ.
Ihe ngwọta zuru oke bụ site na ịgbakwunye ahụ Nicotinamide mononucleotide na NAD + na ọgwụgwọ NMN mpụga. Ndị a ọgwụ ndị na-egbochi ịka nká na-enye ndụ ndụ ọhụrụ na mkpụrụ ndụ ndị na-eme agadi, nke ga-etinyezi anya na nwata.
(3) Imeziwanye Ọbara Ọbara
Otu n'ime mgbanwe ndị na-eme n'oge ochie bụ ntanarị nke ogo arịa ọbara n'ime anụ ahụ. Ya mere, usoro ọbara na-enweta ọtụtụ nsogbu mgbe ebugo nri, oxygen, okpomọkụ, ma ọ bụ wepụ ihe mkpofu sitere na akụkụ ahụ. Ebe ọ bụ na ọnọdụ ahụ nọgidesiri ike, ọ na-aka njọ n'oge na-eduga n'ọnọdụ nke ọrịa ndị na-adịte aka.
Nicotinamide Mononucleotide bụ isi na-arụ ọrụ maka ịmepụta arịa ọbara. Kwe ka m kọwaa. Ngwakọta ahụ na - eme ka NAD +, nke na - eme ka protein deacetylase (SIRT1) rụọ ọrụ.
N'aka nke ozo, SIRT1 deacetylate lysine residues nke na enye aka n'ime mmeputa nke ikuku oxygen. Usoro a na-alụ ọgụ megide nrụgide oxyidative nwere ike ime, reperfusion, ma ọ bụ mmerụ ahụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ahụ n'onwe ya ga-adaba adaba na ischemia na ọnọdụ ndị metụtara ya site na nkwekọrịta ọgwụ (IHC). IPC ga-eme ihe iji kpalite mmepụta nke SIRT1.
Ịnwere ike ịhazi NMN tupu ihe ememme ahụ emee ma ọ bụ n'oge ngosi ya. Tupu ihe ahụ emee, onyinye ahụ na-enye cardio-nchedo site n'ịmepụta mmepụta ATP site na glycolysis.
N'ihe banyere Ischemia, ị ka nwere ike iji Nicotinamide Mononucleotide n'ihi na ọ ga-ebute acidosis ma kpatara mitochondrial impermeability; n'ihi ya, na-ekwe nkwa nchebe nke usoro obi.
(4) Mgbochi Mgbochi
Gịnị ka ị na-atụ anya ya mgbe ọbara na-asọpụ? Ọnọdụ ala ga-eduga na mfu nke akwara. O doro anya na ị ga-ahụ ndị ochie nwere obere arụmọrụ, obere ntachi obi, enweghị ike, na ike gwụrụ oge niile.
Otu n'ime nchọpụta dị egwu nke Dr. Sinclair gbadoro anya na arụmọrụ nke NMN na-eme ka ahụ ike dịkwuo elu. Dị ka 2013 ya na ọmụmụ 2018 na-adịbeghị anya, ụmụ oke ụmụ nwanyị kpughere maka ọgwụgwọ NMN ụbọchị asaa ghọrọ ndị dị mma ma na-arụ ọrụ dị ka ndị ogbo ha.
Ikike anụ ahụ na ntachi nke ụmụ oke ụmụ nwanyị (30 ọnwa) bụ otu ihe ahụ dịka nwa agbọghọ dị ọnwa ise. Ụdị afọ ndị a dị ka afọ 70 na 20 dị n'ime ụmụ mmadụ. Site na nchọta, ị nwere ike ịnye na NMN na-arụ ọrụ na ụmụ mmadụ doro anya na ọnwụ.
(5) Iguzogide Nsogbu Neurodegenerative
Ụbụrụ dị ka ike nke usoro gị. Akụkụ a nwere ike ịbụ ihe kpatara ndị na-eji ọgwụ na-atụkwasị uche na ụbụrụ mgbe ha na-ekwupụta oge ọnwụ.
Mbelata na ọkwa nke NAD + n'ime ụbụrụ na-egbochi ahụ ike n'etiti ndị agadi. Nchịkwa nke NMN na-emepụta NAD + mmepụta, ya mere, na-echebe ọrụ arụmọrụ.
Ọtụtụ ihe ọmụmụ na-egosi na Uru Nicotinamide Mononucleotide bara uru cognition, ọrịa strok, na-egbochi icheta ihe, nke jupụtara n’agadi. Na nchịkọta, nke a Mgbochi nká emeju bụ maka mmezi nke akwara ozi.
NMN na-elekwasị anya na etiology nke ọnọdụ ọ bụla e nyere. Dị ka ọmụmaatụ, Alzheimer's ọrịa na-eme n'ihi mbelata nke NAD +, obere ikuku oxygen na ụbụrụ, na ọdịiche mitochondrial. Increba ụba NMN n'ime ahụ na-atụle mmetụta ndị a niile.
Dị ka otu nnyocha e bipụtara na 2012 si kwuo, Nicotinamide Mononucleotide ga-ejikwa nlezianya jikwaa mmebi intracerebral, nke na-edugakarị na ọrịa strok. Mmụ oke ochie ndị nọ n'okpuru usoro NMN debanyere ọganihu dị mma na mmepụta NAD +. Researchdị nyocha ndị a nwere nchebe kachasị megide ọrịa strok, ọnya na-adịghị, na mbufụt na-ahụ maka ọrịa.
(6) Mgbanwe Metabolism nke Ochie
Ọtụtụ ndị nchọpụta amụwo ma gosipụta na NMN na-eme ka nkwụsị glucose dịkwuo ụtọ ka ọ na-eme ka shuga na-eto eto na-eto eto na-eri nri na-adịghị mma. Ọmụmụ ihe a na-emetụta ụmụ mmadụ meworo agadi bụ ndị na-ebute ọrịa shuga ma ọ bụ n'ihi shuga dị elu ma ọ bụ ihe oriri na-edozi ahụ. Tụkwasị na nke a, ihe oriri na-aba ụba na abụba na-eduga ná nkwụsị insulin.
Nicotinamide Mononucleotide na-ekwusi ike mmepụta nke NAD +, nke n'aka nke ya na-ebelata mmetụ nke afọ ka ọ na-eme ka insulin dịkwuo n'ahụ na akụkụ nke anụ ahụ.
(7) Ọgwụgwọ Ọrịa
Ndị nwere ọrịa shuga nke ụdị II na-egosipụtakarị insulin mgbe niile. Njirimara a bụ n'ihi ọdịda na NAD +. N'ihi ya, mkpụrụ ndụ na-enweta nrụgide oxidative na mbufụt. Ọ bụrụ na ị ka bụ nwa, ahụ ga-eme onwe ya ka ọ dịghachi ọhụrụ site na ihe omume ahụike ọ bụla. Otú ọ dị, mgbe ịka nká, ọkwa NAD + na-ebelata na akụkụ ndị na-enyere ndụ aka dị ka akwara, imeju, ụbụrụ, na pancreas.
Ihe ọzọ na-eso akpata ọrịa shuga metụtara afọ bụ nri nwere abụba dị elu. Dị abụba ndị na-adịghị ahụkebe na-egbochi biosynthesis nke NAD +. N'ịchọ iji gosipụta nrụpụta nke Nicotinamide Mononucleotide na ọgwụgwọ nke afọ na nri na-akpata ọrịa shuga, Yoshino na ndị ọrụ ibe ya jiri ụdị oke abụọ.
Mgbe ha nyechara ọgwụ NMN kwa ụbọchị ruo ihe dị ka ụbọchị iri, ndị ọkammụta ahụ guzobere na ụmụ oke ahụ, nke edobere nri abụba dị elu, dere enweghị nkwenye insulin. N'aka nke ọzọ, ụmụ oke oke shuga gosipụtara mmụba dị ukwuu na hyperlipidemia.
(8) Ịgbaghasị nká
Nsogbu ahụike oge ole na-esochi usoro ịka nká. Dị ka ahụ na-enwe ọtụtụ mgbanwe nhazi ahụ, ụfọdụ n'ime ọrụ cellular na-ada azụ. Were, dịka ọmụmaatụ, ọkwa nke adenine dinucleotide nke nicotinamide na-ebelata na akụkụ dị iche iche, na-eduga nkwụsị nke mmepụta ume site na mitochondrion cell.
Ndị okenye na-agbadata ihe dịgasị iche iche dịka nbibi nke DNA n'ihi mkpụrụ ndụ ndị a na-akpọghị, nrụgide oxyidative vascular, na ọrịa ndị ọzọ na-achọpụta. Ị ma ihe mere? Ọfọn, e nwere protein protein na-arụzi DNA (PARP1) n'ime usoro mmadụ. N'ihe banyere DNA mebiri, NAD + ga-arụ ọrụ protein a iji mezie cell ahụ emetụtara.
Otutu ihe omuma abiala na uru ndi nicotinamide mononucleotide na nká. Dịka ọmụmaatụ, Mills na ndị ọrụ ibe ya jiri ụdị ụmụ oke iji nyochaa mmetụta nke ọdịda NMN na-emetụta ọrịa.
N'ime nnyocha ahụ, ndị nnyocha ahụ kwuru na nchịkwa dị ogologo oge nke ọgwụgwọ ahụ mere ka a gbanwee usoro mkpụrụ ndụ ndị dị n'ime imeju, ụbụrụ skeletal, na anụ ahụ dị mma. Ihe ọzọ bụ na nchọpụta ahụ gosipụtara nkwalite dị na nkwupụta ụbụrụ na-alụso ọrịa ọgụ, mmụba na lymphocytes, na mmalite nke leukocytes.
Akụkụ ọzọ nke ịka nká bụ ọnụnọ nke acha acha-acha na-acha anya. Akpadoro ya na ngwongwo nke ala na enweghi ike iweputa anya mmiri abughi ihe omimi. Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ụmụ oke, nke e tinyere na NNNN ọnwa ọnwa NNN, nwere ọnọdụ niile dị n'elu.
Ogologo ihe bu nani ihe kpatara ndi mmadu zụta Nicotinamide Mononucleotide.
(9) Ọgwụgwọ ibu
Maka ndị agadi, NMN nwere ike belata ruo 10% nke ibu ahụ mbụ na-enweghị ịchọta ala n'etiti etiti na uto. Ejikọtara usoro nchịkwa nke oke ibu na ọrịa shuga. Ala NAD + dị elu na-eweta myschondrial dysfunction; ya mere, ọnụ ala na mmepụta nke ATP.
Ibu ibu na-eme ka mitochondria nwee ike ịmepụta ikike nke ATP maka sel. Ozugbo ị na - enye Nicotinamide Mononucleotide, ọgwụ ahụ ga - eme ka glucose na - ekweghị ekwe na ọrụ ndị ọzọ metabolic metụtara oke ibu.
N'ihe banyere imeziwanye ọbara, NMN maka ọgwụgwọ oke ibu na-eme ihe dịka imega ahụ. Otu mkpụrụ ọgwụ ga-adị mma dị ka iji igwe ịgba ọsọ kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọdịiche dị na ọkwa nke ọdịnaya NAD + na akụkụ ahụ. Ọ bụ ezie na Nicotinamide Mononucleotide na-abawanye NAD + na imeju na akwara muscular, mmega ahụ na-ewulite ngwongwo n'ime mọzụlụ.
Ndi Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Na-arụ Ọrụ n'Ezie Ụmụ Mmadụ?
Ọfọn, nke a nwere ike ịbụ ajụjụ dị ugbu a na-ada gị n'isi. N'ọnọdụ ọ bụla, nyocha niile na ọmụmụ Preclinical gbadoro ụkwụ na Nicotinamide mononucleotide na NAD + na-elekwasị anya n'ụdị igbu egbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ndaputa banyere arụmọrụ nke ọrụ NMN na mmadụ, ọ bụ naanị ihe ị chọrọ ịma. Dr. David Sinclair, onye nchọpụta kacha elu, na mkpụrụ ndụ ihe nketa na Mahadum Harvard bụ otu n'ime ndị na-enweta NMN.
Sinclair kwupụtara na ọ na-ewe mgbakwunye ahụ. Ka ọ dị ugbu a, onye mmụta ahụ edebeghị mmetụta ọ bụla nicotinamide mononucleotide. Kama nke ahụ, ọ na-ekwupụta na ọ na-enwe mmetụta dị nkọ dị obere na-eto eto. Hangovers na jet lags ugbu a dị ka ihe siri ike nye ya. Ọ gara n'ihu na-ekwusi ike na nna ya, onye dị afọ iri asaa, na-ewerekwa mgbakwunye ahụ.
Ọzọkwa, Dr. Sinclair ejiriwo ọgwụgwọ ahụ mee ihe dị ka nkwụsị mbụ na Brigham and Hospital's Hospital. O nwere atụmatụ maka nyochaa ọzọ na mgbakwunye ahụ na ndị agadi nwere ahụ ike. Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe ya n'otu oge zuru ezu, ọ ka ga-ede akwụkwọ akwụkwọ. Sinclair malitere usoro nke abụọ nke ọgwụ a NMN ntinye research na 2018.
Na a Clinical ọmụmụ nke ruru na 1st June 2020, ndị na-eme nchọpụta na-achọ ịmalite mgbanwe na nlezianya na ọrụ beta-cell na NMN supplementation n'ime ụmụ mmadụ. Ndị ọkà mmụta ahụ sitere na Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ nke Mahadum Washington na Ụlọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọgwụ nke Keio na Tokyo.
N'ọnwụnwa mmadụ nke gbapụrụ na 2016 na Mahadum Keio, ndị ọkà mmụta na-achọ ileba anya nchekwa nke NMN na ndị okenye. N'ọga n'ihu nke abụọ, otu ụlọ akwụkwọ ahụ, nke Shin-Ichiro na-edu, na-enyocha nchịkwa NMN ogologo oge. Kedu ihe ọzọ, ìgwè ahụ na-achọ ịtụle ihe ndị metụtara ọrịa metabolic-syndrome, NMN kinetics, na mmetụta ọgwụ na glucose metabolism.
Na nyocha nke ọmụmụ 2017 site na Mahadum Washington, ndị ahụ gụnyere ụmụ nwanyị 50 ndị nọ na 55 ruo afọ 75. A na-etinye usoro ahụ na 250mg nke NMN kwa ụbọchị maka izu asatọ. Ọ bụ ezie na ha bụ ndị ahụ ike, ụmụ nwanyị a nwere nnukwu glucose ọbara, triglyceride, na BMI. Ọmụmụ ihe ahụ erubeghị.
Ka ọ dị ugbu a, enweghị akwụkwọ na-akwado ọrụ NMN na mmadụ. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịkwado n'ihi na ihe na-esi nri ma ọnwụnwa ahụike nwere ike ikwe nkwa.
Kedu esi eji Nicotinamide Mononucleotide (NMN) maka igbochi agadi?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta nicotinamide mononucleotide, e nwere ihe ole na ole ị chọrọ ịma.
Ị nwere ike na-ewere ọgwụgwọ dị ka ihe oriri na-edozi ahụ ebe ọ na-enwetụbeghị nkwado FDA iji bụrụ ọgwụ ọgwụ.
Usoro nhazi dị n'etiti 25mg na 300mg dabere na uru ahụike ịchọrọ iji nweta. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ekwupụta na ha na-aga 1000MG kwa ụbọchị. Were, dịka ọmụmaatụ, Dr. Sinclair na-ewere 750mg / ụbọchị. E wezụga nke ahụ, ọ na-agbakwunye ọchịchị a na resveratrol na metformin.
Na nyocha NMN, ọtụtụ ndị na-eme nnyocha ga-etinye ndị na-achị ha na 100mg na 250mg.
Oral vs. Nhọrọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwelite bioavailability nke mmezi a, ị kwesịrị ịzụta mbadamba ụrọ Nicotinamide Mononucleotide maka nchịkwa nke sublingual. Iji ọgwụ ọnụ ekwu okwu na-ebelata ego ị na-etinye n'ime anụ ahụ. Ihe kpatara ya bụ na ọ na-enweta mgbochi na mmerụ ahụ ka ọ na-agabiga na tract digestive na imeju.
NMN na-emepụta ihe na-abanye n'ọbara na-enweghị ihe ọ bụla filtrations. Ọnụ ọgụgụ absorption nke usoro nnyefe a bụ ihe dịka okpukpu ise karịa nchịkwa ọnụ. N'okwu a, ị ga-eme ka usoro ọgwụgwọ ahụ dịkwuo maka mbido metabolism mbụ n'ime imeju. Ka e were ya na ị na-eme nyocha, ị nwere ike ịchọrọ ịchọta ngwongwo ụbụrụ na-eme ka ị nwee ike mezue ọmụmụ ihe ahụ.
Mmetụta Mmetụta nke Mmetụta Na-eme Ngwakọta Ngwakọta nke Ị Kwesịrị Ịma
Pdị dịkarịsịrị ka ndị ahụ nke niacinamide na vitamin B3 ndị ọzọ gosipụtara bụ ihe ndị ọzọ na-akpata s. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ adịghịdị ahụ ha ma ọlị. Dịka ọmụmaatụ, onye ọkà mmụta sayensị kachasị elu nke Mahadum Harvard kwetara na ọ na-ewere NMN, mana ọ hụbeghị mmetụta ọ bụla ịkụ aka.
Ka ọ dị ugbu a, n'ime ọrụ niile Nicotinamide Mononucleotide na-arụ ọrụ na ụmụ oke, ọ dịghị data na-egosi ịdị adị nke mmetụta ọ bụla dị na ụdị ọbara ọbara. Ọ dịghị onye nchọpụta edepụtawo ihe mgbaàmà na-adịghị mma na nchịkwa NMN dị mkpirikpi na ogologo oge.
Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta ihe ndị na-adịghị mma;
Mmetụta ndị na-adịghị mma dịka nhụchasị, mkpuchi, ma ọ bụ rashes
N'okwu ndị na-adịkarịghị, mmetụta nchịkọta na-akpata nicotinamide mononucleotide pụrụ ịdị njọ ruo n'ókè ị ga-achọ nyocha ahụike ozugbo. Iji kọwaa ole na ole, nsogbu iku ume, obi mgbawa oge, mmetọ na-aga n'ihu, ịkpụcha akpụkpọ anụ, na ụkọ agụụ bụ n'etiti mgbaàmà dị ukwuu.
Ruo nke a, ọ bụ naanị ndị agadi nwere ogo ahụike na 45 ka afọ 75 nọ. N'ihi nke a, ndị na-esonụ ga-akpachara anya tupu ị na-elekọta NMN mgbochi ịka nká.
Ndị nne na-azụ na ndị nọọsụ
Onye ọ bụla nwere akụkọ ntụrụndụ nke NMN
Ndị ọrịa na-aṅụ ọgwụ maka ọrịa ndị na-adịghị ala ala
Ebee ka m nwere ike ịchọta ọgwụ ọjọọ-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
(1) NMN nri nri
Eleghi anya ị ga - eme ka ị mara ihe kpatara ị ga - eji zụta Nikọsinamide Mononucleotide mgbe ị nwere ike ịchọta ya na nri ụfọdụ. Ka m kọwaa nkenke ihe kpatara mmezi a dị mkpa.
Ka NAD + na-adabere na ahụ n'ihi ịka nká, mkpụrụ ndụ agaghị enwe ike imeri mmetụta ahụ. N'oge a, naanị nhọrọ gị nwere ike iji nchịkọta NMN. Ndị dọkịta ga-agba gị ume ka ha buru nri NMN dị ka broccoli, mushrooms, edamame, ma ọ bụ ogwu. Otú ọ dị, nri ndị a ga-enye ihe na-erughị 5% nke ihe ahụ gị chọrọ.
FDA kwadoro na mmadụ ọ bụla chọrọ ihe dịka 560mg nke NMN kwa ụbọchị. Eche na ị ga - enweta mgbakwunye site na broccoli, ị ga-eri ihe 1500 pound nke otu.
(2) Ihe NMN
The nicotinamide mononucleotide nnukwu ntụ ntụ dị maka ire ere n'ọtụtụ ọgwụ na ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụfọdụ maka nyocha gị, ị nwere ike ịme iwu buru ibu, nke na-abịa na ọnụ ahịa ego ma gbaghaa ụgwọ ebubo.
Ime ntaneti ịntanetị nke NMN abụghị nanị na-echekwa oge gị, kamakwa ị na-enye usoro ihe dị mma maka ịtụle ọnụahịa dị iche iche. Ọ bụrụ na ị bụghị onye nchọpụta, ị ka nwere ike ịzụta Nicotinamide Mononucleotide Mmeju maka ojiji nkeonwe. Tupu ị nye iwu, hụ na ọ bụ nri ọka.
Ọ na-ada ụda na-ekwughị na NMN na-agbatị ndụ ụmụ mmadụ. Otú ọ dị, nkwupụta a na-ejide. Ihe kpatara ọnwụ n'etiti ndị agadi bụ n'ihi ọrịa ndị na-ebute oge, nke na-abịa n'ihi arụmọrụ na-adịghị mma.
The mgbochi ịka nká Nicotinamide Mononucleotide bụ nanị ụzọ iji melite nnyefe mmanụ ụgbọala ma mee ka mkpụrụ ndụ dịkwuo elu. Ọ na-eme site nchịkọta akụkọ NAD +, nke na-achọ ịjụ ka anyị na-eto.
Iji ọgwụ creams, moisturizers, sunscreens, ma ọ bụ ịmalite na-emega ahụ mgbe niile na-edozi ahụ nwere ike ịgbanwe ihu gị. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịghọta ihe kpatara nsogbu ịka nká na ị ga-esi nagide ha n'otu n'otu. Nicotinamide mononucleotide na-agbanwe usoro ịka nká site n'imezi DNA mebiri emebi, ichebe ụbụrụ, usoro obi obi, rụọ ọrụ ahụ ike, na ịkwalite ntachi obi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nicotinamide mononucleotide nnukwu ntụ ntụ, soro anyị na-enwe ọnụ ahịa enyi.
Mills, KF, Yoshino, J., Yoshida, S., et al. (2016). Njikwa Ogologo oge nke Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Age Physicallogical Decline in Mice. Cell Metabolism.
Yoshino, J., Mills, KF, Imai, SI, na Yoon, MJ (2011). Nicotinamide Mononucleotide, isi NAD + Intermediate, Na-emeso Pathophysiology nke Ọgwụ Nri - na Ọrịa Na-arịa Ọgbọ na Ụmụaka. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., Byun, J., Zhai P., Ikeda, Y., Oka, S., na Sadoshima, J. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, Nkeji nke NAD, na-echebe Obi si Ischemia na Reperfusion.
Sinclair, DA, Uddin, GM, Youngson, NA, na Morris, MJ (2016). Na-ejiri NAD + kọọkọ Nicotinamide Mononucleotide (NMN) na izu isii nke mmega na Obese Ụmụ nwanyị.
Imai, S., Yoshino, J., Mills, KF, Grozio, A., et al. (2019) Slc12a8 bụ Nicotinamide Mononucleotide Transporter. Nature Metabolism.
De Picciotto, NE, Mills, KF, Imai, S., Gano, LB, et al. (2016). Nicotinamide Mononucleotide Na-agbanwe Ọkpụkpụ Na-ahụ Maka Ọkpụkpụ na Ahụhụ Na-akpata Oxidative na Mice Aging.
Yao, Z., Gao, Z., Yang, W., na Jia, P. (2017). Nicotinamide Mononucleotide Inhibits JNK Activation to Reverse Alzheimer Disease.
Hou, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Lautrup, S., et al. (2018). NAD + Mgbakwunye Na-eme ka atụmatụ Alzheimer dị elu na DNA Damage Responses in a New AD Mouse Model with Introduced DNA Repair Efficiency.
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) Ntụ ntụ (1094-61-7).
3.Nicotinamide Mononucleotide na NAD +
Nyocha 4 nke Nicotinamide Mononucleotide na-arụ ọrụ na ụmụ oke
5. Uru sitere na Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
6. Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Na-arụ Ọrụ n'Ezie Mmadụ?
7.Etu esi eji Nicotinamide Mononucleotide (NMN) maka oria aka?
8. Mmetụta Akụkụ nke Nicotinamide Mononucleotide I Kwesịrị Knowmara
9.Olee ebe m nwere ike ịchọta ọgwụ na-egbochi ịka nká-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?